समयमै उपचार नभए ज्यानै लिने एपेन्डिसाइटिस भनेको कस्तो रोग हो ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरु ? सबैले जानी राखौं – Ap Nepal
समयमै उपचार नभए ज्यानै लिने एपेन्डिसाइटिस भनेको कस्तो रोग हो ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षणहरु ? सबैले जानी राखौं
July 25, 2021 1697
एजेन्सी । एपेन्डिसाइटिस एउटा आकस्मिक अवस्था हो । यो रोगले समयमा उपचार पाएन भने मान्छेको ज्यानै जान पनि सक्छ । एपेन्डिक्स भन्ने अङ्ग सुन्निएको अवस्थामा एपेन्डिसाइटिस हुन्छ । कहिलेकाहीँ त फुटिसकेको पनि हुन सक्छ ।
Prevमलेशियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याएका क्याप्टेन विजय लामाले पोखे यस्तो दु:ख..भावुक हुदै यसो भन्छन्
Nextबिजय शाही झुट्टै हुन भन्दै मेमोरी किङ्ग मिडियामा ,अर्पन शर्मालाई पनि गरे यस्तो आग्रह (भिडियो सहित)
गायक राजु लामाले राखे सगरमाथामा यसरी राखे विश्व कीर्तिमान